Real Madrid Oo Markii 3aad Oo Xidhiidh Ah Ku Guuleysatay Champions League+SAWIRRO. – Cayaaraha dunida
Luka Modric ayaa caawa loo caleemo saaray Ballon d’Or.2018.
DR. CALI CUSMAAN: “CABDI DHEERE HALYEEY AAN LA ILOOBI DOONIN” (VIDEO+SAWIRO).
C/qani Saciid Carab oo loo doortay guddoomiyaha xiriirka kubadda cagta Soomaaliya.
Ina Lilaahi wa ina ileyhi raajicun.
DEG DEG: Solari oo si RASMI ah loogu dhiibay shaqada Real Madrid.
Wararka | By admin
Real Madrid Oo Markii 3aad Oo Xidhiidh Ah Ku Guuleysatay Champions League+SAWIRRO.
Real Madrid ayaa markii saddexaad ku guulaysatay koobka UEFA Champions League kadib markii ay 3-1 ku garaacday kooxda Liverpool kulankii finalka ee magaalada Kiev ka dhacay. Real Madrid ayaa noqotay kooxdii ugu horaysay ee intii magaca UEFA Champions league loo bixiyay tartanka kooxaha Yurub saddex xili ciyaareed oo xidhiidh ah ku guulaysatay koobkan.
Karim Benzema ayaa Real Madrid goolka furitaanka ugu dhaliyay qalad waali ahaa oo uu sameeyay goolhayaha Liverpool ee Loris Karius kaas oo ceeb iyo waji gabax xun kala kulmay kulankan laakiin Sadio Mane ayaa u muuqday in uu ciyaarta ka dhigay mid xiiso badan kadib markii uu Liverpool u keenay goolkii barbarraha.
Laakiin Gareth Bale oo kaydka ka soo baxay isla markaana buuxiyay booskii Isco ayaa gool cajiib ah Real Madrid hogaanka ugu soo celiyay isaga oo markale Loris Karius ku ciqaabay qalad kale oo murugo badan ku abuuray Liverpool waxayna Madrid guushan ku gaadhay 3-1 .
Mohamed Salah ayaa xili hore oo qaybtii hore ahayd dhaawac xanuun badan looga saaray isaga oo oohinta xejisan waayay balse sidoo kale Carvajal ayaa dhawr daqiiqo kadib isna garoonka oohin kaga baxay markii uu isna dhaawac soo gaadhay.
Kaydka:Simon Mignolet, Emre Can, Dominic Solanke, Ragnar Klavan, Adam Lallana, Nathaniel Clyne, Alberto Moreno.
Kaydka:Kiko Casilla, Nacho, Mateo Kovacic, Lucas Vazquez, Marco Asensio, Theo Hernandez, Gareth Bale.
Liverpool ayaa isla daqiiqadii kowaad ee ciyaartaba bilawday in ay dardar xoogan ugu dhaqaaqdo dhinaca Real Madrid taas oo Los Blancos ku qasabtay in ay la tacaasho cadaadiska kaga imanayay Reds waxayna shaqada ugu muhiimsan ka dhigatay in ay difaacasho xoogan samayso.
DAQIIQADII 23 AAD Liverpool ayaa heshay fursadaheegii ugu horeeyay oo goolal lagu dhalin karayay iyada oo markii hore Firmino uu kubbad isla rogay laakiin difaaca Madrid ayaa kubbada joojiyay laakiin da’yarka Alexander-Arnold ayaa kubbad meel fiican taalay si xoogan u darbeeyay waxaana awood kubbada joojiyay goolhaye Navas oo kubbad shabaqa kooxdiisa gali kartay badbaadiyay.
DAQIIQADII 30 AAD Waqtigii Qalbi Jabka iyo oohinta! Xidiga ay Liverpool eeganaysay ee Mohamed Salah ayaa oohinta xejisan kari waayay kadib markii uu dhaawac ka soo gaadhay markii uu Sergio Ramos uu gacanta si hoose ugu qabtay isla markaana uu dhulka ku soo jirday taas oo keentay in Salah uu dhaawac xanuun badani soo gaadhay.
Dhaawac Mohamed Salah ayaa jaho wareer ku abuuray Liverpool iyada oo ay Real Madrid u ahayd arin wayn oo ka dul qaaday culays ay si xoogan ula tacaalayeen, waxaana Jurgen Klopp qasab ku noqotay in uu kaydka ku laabtay si uu xidiga kooxdiisa ugu muhiimsan xili horeba isaga oo ilmaynaya u saaro.
Adama Lallana oo xili ciyaareed dhibaato badan soo qaatay isla markaana dhaawac ku maqnaa waqti aad u dheer ayaa kaydka ka soo baxay, laakiin isla markii ciyaarta dib loo bilaabay Real Madrid ayaa la soo baxday dar dar cusub iyada oo si cad ugu muuqatay in saamaynta Salah ay cabsi badan ka qabtay.
DAQIIQADII 37 AAD Qalbi jabkii iyo oohintii labaad! Haddii oohintii Mohamed Salah ay gilgishay jamaahiirta Liverpool waxaa markale isaga oo wajiga qarsanaya oo si qalbi jab ah garoonka uga baxay Dani Carvajal kaas oo isna markiisa uu soo gaadhay dhaawac dhibaato wayn ahi, waxaana kaydka laga soo kiciyay Nacho.
Xamaasadii iyo farxadii ciyaarta waxaa saamayn xoogan ku yeeshay oohinta Mohamed Salah iyo Dani Carvajal ee dhaawacyada badalay qorshihii ciyaareed ee labada kooxood, laakiin saamaynta uu Salah u lahaa Liverpool iyo tan uu Carvajal u lahaa Madrid ayaa kala waynayd waxayna Los Blancos noqotay kooxda inta badan awooda sare yeelatay.
DAQIIQADII 43 aad Karim Benzema ayaa soo taabtay shabaqa Liverpool laakiin calanwadaha ayaa si sax ah u tilmaamay in xidiga ree France uu offside ku jiray ka hor intii aanu kubbada ku celin goolka Reds iyada oo Karius uu badbaadin cajiib ah ka sameeyay Ronaldo oo darbo madax ah ku sameeyay kaas oo sidoo kale intii aanu darbada tuurin offiside u muuqday.
Si kastaba ha ahaatee qaybtii hore ee ciyaarta ayaa ahayd mid aan wax goolal ah la kala dhalin iyada oo min hal bartilmaameed oo kaliya ay labada kooxood sameeyeen 45 kii daqiiqo ee qaybtii hore iyo waliba 3 daqiiqo oo lagu daray waxaana lagu kala nastay barbaro gool la’aan ah.
Laakiin waxaa lays waydiinayay haddii ay Liverpool dadaalkeeda sii wadi karto maadaama oo ay lumisay xidigii ay guusha ka filayeen ee Mohame Salah, waaxaana sidoo kale lays waydiinayay qaabka uu Zidane garoonka ugu soo laaban doono maadaama oo qorshihii Klopp uu si wayn u wiiqmay.
Markii layskugu soo laabtay qaybtii labaad ee ciyaarta ayay Real Madrid soo laabtay iyada oo dar dar waali ah ku socota waxayna markiiba culays xoogan saartay Liverpool oo aan la soo laaban dardartii ay qaybtii hore ku jirtay.
DAQIIQADII 48 aad birta goolka! Real Madrid ayaa ugu dhawaatay in ay hesho goolkeeda furitaanka kadib markii ay Liverpool dhawr qalad oo xidhiidh ah samaysay wuxuuna Lallana ku fashilmay in uu kubbada iska saaro halka Karius uu markiiba soo baxay laakiin darbo uu Isco tuuray ayaa birta goolka ka soo booday!.
DAQIIQADII 51 AAD Real Madrid ayaa sida ugu sahlan ula timid goolkeeda furitaanka kadib markii uu Karim Benzema hadiyad cajiib ah ka helay goolhaye Loris Karius oo cadho iyo ciil ku dilay jamaahiirta kooxdiisa Liverpool kaas oo inta uu si sahlan u qabsaday kubbad dheer oo u timid ayuu haddana si lama filaan ah Benzema ka caawiyay in uu goolkan si sahlan u dhaliyo waxayna ciyaartu noqotay 1-0 ay Real Madrid hogaanka ciyaarta kula wareegtay.
DAQIIQADII 55 AAD Liverpool ayaa ciyaarta dib ugu soo laabtay kadib markii uu Sadio Mane dhaliyay goolka barbaraha kadib markii uu Lovern caawin ka helay kubbad uu Firmino koorne ka soo tuuray, wuxuuna xidiga ree Senegal ciyaarta ka dhigay barbaro 1-1 ah.
DAQIIQADII 61 aad Zidane ayaa ciyaarta ka saaray Isco wuxuuna kaydka uga yeedhay Gareth Bale si uu xawaare iyo dar dar cusub kooxdiisa ugu soo kordhiyo maadaama oo ay Liverpool tamar badan isticmaashay qaybtii hore laakiin Bale ayaa markiiba saamayn layaableh ku yeeshay ciyaarta.
DAQIIQADII 64 AAD Gareth Bale ayaa gool cajiib ah oo laba lugoodley ah kooxdiisa Real Madrid ugu keenay goolka labaad isaga oo si qurux badan u dhamaystiray kubbad caawin uu ka helay Marcelo wuxuuna xidiga ree Wales muujiyay sababta uu muhiim ugu yahay Madrid waqtiga ay u baahan tahay, wuxuuna Bale ciyaarta ka dhigay 2-1 ay markale Madrid hogaanka ciyaarta ku soo ceshatay.
DAQIIQADII 70 AAD BIRTA GOOLKA! Sadio Mane ayaa noqday xidiga wax walba Liverpool u qabanayay wuxuuna darbo ku garaacay goolhaye Navas laakiin xidiga ree Senegal ayaa arkay fursada goolkiisa labaad oo ay kubbadu birta goolka ku dhacday.
Liverpool ayaa si xoogan wali u raadinaysay qaabkii ay mar labaad ciyaarta ugu soo laaban lahayd laakiin Real Madrid ayaa raadinaysay goolka saddexaad si ay ciyaarta u disho waxaana Liverpool dhibaato wayn ku ahaa goolhaye Karius oo musiibo wayn ku noqday.
DAQIIQADII 83 aad Real Madrid ayaa ciyaarta hurdada u dirtay kadib markii uu goolhaye Loris Karius markale sameeyay qalad ay saxaafadu si wayn uga hadli doonto wuxuuna Bale u ogolaaday in uu dhaliyo goolka saddexaad ee ay Real Madrid sida dhabta ciyaarta ugu dishay ee ay meesha uga saartay halistii Liverpool ay goolka labaad ku raadinaysay.
Haddii uu goolkii Gareth Bale ee hore uu ahaa mid cajiib ah oo in badan lagu xusuusan doono finalkan Champions league waxa uu goolkiisa labaad ahaa mid ceeb iyo fadeexad ku ah goolhaye Loris Karius, laba qalad oo sidan oo kale ah kama samayn kartid kulan final Champions league ah, haddii aad samayso waxaa kugu dhacaya musiibada uu Loris Karius sameeyay ee Benzema iyo Bale!.
Ugu danbayn ciyaarta ayaa ku dhamaatay 3-1 ay Real Madrid guul kaga gaadhay Liverpool isla markaana ay markii saddexaad oo xidhiidh ah ugu guulaysatay koobka UEFA Champions League. Los Blancos ayaa hanatay koobkeedii 13 aad ee Champions League iyada oo halkeeda ka sii wadata taariikhda uu Zidane ka dhigayo koobka kooxaha Yurub.